नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : रेमिट्यान्स मात्र बुझ्न र खान जानेको हाम्रो सरकारले आज एकै दिन २० वटा लाशका बाकस बुझेको छ काठमाडौंको बिमानस्थलमा ।
रेमिट्यान्स मात्र बुझ्न र खान जानेको हाम्रो सरकारले आज एकै दिन २० वटा लाशका बाकस बुझेको छ काठमाडौंको बिमानस्थलमा ।
यि हृदय बिदारक तस्विरहरुले कसको मन थामिएला र !!
जिउँदो हुँदा नेपाल फर्किन दिएन सरकारले, मरे पछि कयौँ महिना पछि बल्ल लाश बुझ्दैछौं भन्दै रुँदै पीडित परिवारको बिलौना र सरकार प्रति आक्रोस देखिन्थ्यो भन्छन सो बखत त्यहाँ उपस्थित पत्रकारहरु ।
रेमिट्यान्स मात्र बुझ्न र खान जानेको हाम्रो सरकारले आज एकै दिन २० वटा लाशका बाकस बुझेको छ काठमाडौंको बिमानस्थलमा । समयमै लाशका बाकसहरु बुझ्न समेत नपाउने पीडित परिवारको त्यो मर्म कसले बुझिदिने ? कहिले बुझिदिने ? अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट, कतारबाट आज एकैदिन २० वटा शव नेपाल
ल्याइएको छ । कतार एयरवेजको चार्टर्ड जहाजले २० जना नेपाली नागरिकको शव र कतारमा अलपत्र परेका ४३ जना नेपालीलाई ल्याएको हो । आज नै कुवेतको जजिरा एयरले पनि दुईवटा शव ल्याएको छ । यस्तै हिमालय एयरलाइन्सले साउदी अरबबाट एउटा शव ल्याएको छ ।
सेतोपाटीमा नारायण महर्जनले पोस्ट गरेका यि हृदय बिदारक तस्विरहरुल्ले कसको मन थामिएला !!